Kuvhura Game Apk Dhawunirodha Ye Android [Game] - Luso Gamer
Kuvhura Game Apk Dhawunirodha Ye Android [Game]
December 3, 2021 by John Smith
Kune akawanda akasiyana simulation emitambo maapplication anowanikwa kurodha online. Asi tichitarisa kufarira kwevatambi nhasi pano taunza Unpacking Game Apk. Muno mukati memutambo wekutamba, vatambi vanogona kunakidzwa nekuita akawanda ekurongedza masitaera.
Kubva pakatanga budiriro yemunhu, kurongedza kwaionekwa senzira yakaoma kwazvo. Nekuti kana usiri kugona kubata zvinhu zvine hunhu. Ipapo izvo zvigadziriso zvisina tsika zvinogona kutora nzvimbo yakawanda.
Izvo zvinopedzisira zvakanganisa kutakura kugona kwemukwende. Saka kuti udzidze hunyanzvi uhu zvinoda kudzidzira kwakawanda muhupenyu chaihwo. Saka pano taunza iyi nyowani yekutamba application inonzi Unpacking Game Android. Uko vatori vechikamu vakapihwa mukana wakaenzana wekudzidza hunyanzvi uhu hwakasiyana.
Chii chinonzi Unpacking Game Apk
Unpacking Game Apk ndeye online simulation-yakavakirwa mutambo wemutambo wakagadzirwa neWitch Beam. Kunyangwe vhezheni pano isu tiri kutsigira ndeyemahara uye haidi kunyoreswa kana kunyoreswa. Zvese zvinoda kuitwa nevatambi kungotora yazvino vhezheni kubva pano.
Nyika yepamhepo yakapfuma mumashandisirwo akasiyana emitambo. Kunyangwe vazhinji vevatambi veandroid vanobvunza Play Store yekurodha mitambo. Asi kana zvasvika pakuwanikwa kwakananga pasina mvumo. Ipapo vazhinji vanosarudza vechitatu mapato masosi.
Asi tichifunga nezvekutsvagirwa kwemitambo mitsva yemitambo, vagadziri vacho vakazopedzisira vauya neiyi nyowani inoshamisa chikuva. Iko vatambi vanogona kunakidzwa nekudzidza nzira dzakasiyana dzekurongedza. Kunyangwe kunze uko mimwe mitambo inoenderana nekufamba inosvikika.
Asi mizhinji yemitambo iyoyo inosvikika inogona kumanikidza vatambi kutenga zvinhu zvakasiyana. Idzo dzinogona kudhura kusvika kumazana. Asi pano tadzoka neichi chitsva RPG Game iyo yakasununguka kutamba. Ingoisa iyo yazvino vhezheni yeUnpacking Game Nyaya uye unakirwe nekusingaperi zvinoshamisa.
zita Kuburutsa Game
zera 7.9 MB
Developer Muroyi Beam
Package Zita com.guide.unpacking.tips.app
chikamu Games - Simulation
Tichiri kutamba mutambo wacho takawana zvikamu zvakasiyana zvinonakidza mukati. Izvo zvinosanganisira Kuzorora uye Kururamisa Mberi, Kusunungura Tricks, Kuzorodza Soundtracks uye HD Display etc. Kunyanya kukosha uye kunoshamisa kuwedzera ndeye Relaxing Soundtracks.
Mazhinji emitambo yemitambo inoshaya chimiro ichi nekuda kwekushaya kufarira. Kunyangwe mamwe maapplication emitambo anogona kupa akawanda manzwi anotamba basa rekuvhiringidza. Apo vatambi vangatadza kutarisa zvinangwa nekuda kwekushaya kufarira.
Kuita kuti mutambo wemutambo uwedzere kunakidza uye wakasarudzika, ivo vanogadzira vakashanda pamusoro pegraphic pixels. Kuvandudza graphic pixels kuchabatsira mukunatsa mutambo wemutambo. Rangarira nekuda kwekushandiswa kweHD pixels, inogona kupa inogoneka kuratidza.
Kushandiswa kweHD Pixels kunopfavisa zvinhu zvinoratidzwa. Mabhegi, mapasuru, mabhokisi, uye marongerwo emakamuri zvakachengetwa zvakakwirira. Avo vanoda kuwana uye kubata zvinhu zvakanyanya mukati memabhegi avo. Unofanira kudzidza nezvemanomano akasiyana.
Mamwe ematiki akakosha anosanganisira ruzivo achagovaniswa pano mukati memutambo. Saka wakagadzirira kutonga kuti uri kurongedza hunyanzvi. Ipapo isu tinokurudzira avo vatambi kurodha uye kuisa yazvino vhezheni Unpacking Game Yemahara Dhawunirodha Android.
Kuisa mutambo kunopa iyi HD simulation chiitiko.
Apo vatori vechikamu vanoda kudzidza nezvemaitiro ekurongedza.
Yechitatu-bato kushambadzira inobvumidzwa.
Asi ichaonekwa pamusoro pechidzitiro kashoma.
Game interface yakachengetwa iri nyore.
HD Pixels anoshandiswa kuita chiitiko chechokwadi.
Maitiro ekurodha Unpacking Game Apk
Kana zvasvika pakurodha yazvino vhezheni yemitambo app. Vashandisi veAndroid vanogona kuvimba newebhusaiti yedu nekuti pano pawebhusaiti yedu tinongogovana echokwadi uye epakutanga emitambo maapplication. Kuita chokwadi chekuchengetedza uye kuvanzika kwevatambi.
Takahaya timu yenyanzvi inoumbwa nenyanzvi dzakasiyana. Kunze kwekunge timu ine chokwadi nezve kushanda zvakanaka kweApk. Isu hatimbope iyo yemitambo app mukati mekurodha chikamu. Kuisa Unpacking Game Dhawunirodha ndapota tinya pane iri pazasi-rakapihwa link.
Iyo app yemitambo yatiri kutsigira pano haina kumbobvira ive yedu. Izvi zvinoreva kuti hatife takatsigira kodzero dzemitambo app. Saka isa uye unakirwe neakakosha maficha emutambo panjodzi yako wega. Kunyangwe paine chakaipa hatizove nemhosva pane izvozvo.
Pano pawebhusaiti yedu, takagovana akasiyana Simulation ane chekuita nemitambo maapplication. Kuti uongorore iyo mitambo inowirirana ndapota tinya pane zvakapihwa zvinongedzo. Ndivo Marori eEurope 3 Apk uye Squid Royale Mutambo Apk.
Saka iwe uri kutsvaga yakanakisa HD yakapusa simulation mutambo wemutambo. Izvo ndezvemahara kurodha uye hazvidi kunyoreswa kwekutamba. Ipapo isu tinokurudzira avo vatambi kurodha uye kuisa Unpacking Game Apk.
Categories Simulation, Games Tags RPG Game, Kuvhura Game Android, Kusunungura Mutambo Apk, Unpacking Game Download, Kuburitsa Nyaya Yemutambo Post navigation
Pinki Tunnel Apk Dhawunirodha Ye Android [VPN]
Sunny Game Apk Dhawunirodha Ye Android [Casino]